Mr. Potato Spread Inozivisa mikana yekutengesa - Potatoes News
Mugovera, July 31, 2021
Mr. Potato Pararira Inozivisa mikana yekutengesa
Gourmet yakatakura mbatatisi! Yekutanga Crab Pot, Chicken Bacon Ranch uye Chicken Fajita..singashoma shoma pane avo akawanda sarudzo!
Panguva ye2020 yaive dambudziko, imba yekutengesa yemhuri yevatema, VaPatato Kupararira, vakaiona senguva yakakosha yekuigadzira kana kuiputsa.
Vakatanga, uye murume-nemukadzi-timu, Aaron naLakita Spann, vakauona semukana wekusimuka kuenda pachiitiko ichi, vachidzokera mukumhanyidzana pamwe nepfungwa dzakavatora kubva pakushandira mbatatisi dzakatakura kubva kukicheni yavo yekumba, ndokuzoenda mune yekutengesa. kicheni, kuenda kurori yekudya, wozoenda kuresitorendi yavo yekutanga yeQSR uye ikozvino vachipa mikana yefranchise.
"Ichi chagara chiri chinangwa chenguva refu kuchikwata chedu," akadaro Lakita. "Rutsigiro uye kurudziro yatakatambira pamusoro pemakore tichishandira nharaunda yedu yatigadzirira izvi uye tinofara kune mamwe matunhu, maguta nenzvimbo kuti tikwanise kupa chikafu chedu."
Menyu yaVaPotato Inopararira ine akati wandei mbatatisi dzesarudzo dzakatakurwa nenyama dzakasiyana siyana nemukaka uye masaladi embatatisi. Vatengi zvakare vane sarudzo yekugadzirisa yavo zvisikwa.
Vanofarira vanosanganisira Iyo Crab Pot - yavo yakasarudzika yekutengesa mbatatisi, yakatakurwa ne shrimp, nyama yegakanje, soseji inoputa, chibage chinotapira, zai rakavira, Sauce siginecha uye ine Mr. Potato Kuparadzira gariki bhotoro uye Old Bay mwaka pamwe chete ne Hog Denga, Chicken Bacon Ranch uye nezvimwe.
Aaron naLakita vachange vachishandisa Franchise Musiki, kambani yekuvandudza franchise iri muMiami, FL, kupa mbiri mikana yekushambadzira: nzvimbo yezvidhinha kana dhaka rekudya.
Iyo yechitinha-uye-dhaka modhi inoda imwe-nguva franchise muripo we $ 25,000 neinofungidzirwa kutanga mari yekudyara ye $ 133,800 kusvika $ 196,300, nepo chikafu chikafu chinoda madhora zviuru makumi maviri nemari yekutanga mari ye $ 20,000 kusvika $ 83,400.
Mikana miviri iyi inopa ma franchisees nemukana wekutendeuka uyo unosanganisira chirongwa chakadzama chekudzidzisa, zvivakwa zvekutengesa dzimba, zvekushandisa zvemukicheni, zvigadzirwa, zvekushandisa, pamwe nemwedzi mitatu yemari yakachengetedzwa pakati pezvimwe zvakanaka. Franchise yekutengesa ichave yakatarisana neSoutheast.
"Kubatana nekambani yekusimudzira mari kwakatikoshera," akadaro Lakita. “Taida kupa vemafranchise mapakeji akazara kuburikidza neyakagadziriswa nzira yekuvagadzirira zvese zvebhizimusi kubva pakugadzira menyu kusvika mukuchengetedza mabhuku uye kushambadzira. Tinoda kuti vagadzirirwe kubudirira. ”
Tags: Mr. PotatoQSR yekudyira
Mairi Pamwe Chete
Nyowani - Fiesta Fries, Ngatipembererei!
ITC's Sunfeast Matambudziko Anowanikwa Bangladeshi Potato Snack
Feni-inodiwa Sour Cream & Onion Pringles Inowana iyo Inosimudzira
Walmart Inounza Frito-Lay's 'Flavors Kubva kuIndia' Potato Chips kuCanada
Vanoongorora vanoti Irish potato nzara pathogen yakamisa kuputika pamakondinendi matanhatu
Pilot chirongwa chinogona kuita kuti kurima mbatatisi kudhure, kuve nyore kuwanikwa muNorth
CHICKEN RICE, LAKSA-FLAVORED POTATO CHIPI KUTANGA MU SINGAPORE
4 makore apfuura